कार्बन व्यापार सूचीमा नेपालका वनजंगलहरु | Pardesh Baata (परदेश बाट)
कार्बन व्यापार सूचीमा नेपालका वनजंगलहरु
अगस्ट 14, 2008 at 8:51 अपराह्न टिप्पणी छोड्नुहोस्	नेपालका जंगल पहिलोपटक ‘कार्बन’ व्यापारका लागि छनोट भएपछि ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा व्यवहारमा लागू हुने भएको छ । बोटबिरुवामा भण्डारण हुने ‘कार्बन डाइअक्साइड’ बेचेर मुलुकले वाषिर्क ३ देखि ४ अर्ब रुपैया“ कमाउन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
भण्डारण भएको कार्बनको परिमाणका आधारमा विश्व बैंकमार्फत रकम प्राप्त गर्ने जानकारी वन मन्त्रालयका निमित्त सचिव आनन्दप्रसाद पोखरेलले दिएका छन् । बढी कार्बन उर्त्र्सजन गर्ने विकसित मुलुकले वनजंगल जोगाउने वातावरण मैत्री मुलुकलाई रकम तिर्नु पर्ने प्रावधान छ । उक्त रकम विश्व बैंकमा जम्मा हुन्छ ।
बोटबिरुवाले कार्बन भण्डारण गरी वायुमण्डलमा जानबाट रोक्छ । कार्बन ग्लोबल वार्मिङको प्रमुख कारक हो । वायुमण्डलमा यसको मात्रा बढ्दै गएको छ । ‘बोटबिरुवाले कार्बन समात्छ, भण्डारण गर्छ र अक्सिजन फाल्छ । त्यसैले यो वातावरण मैत्री र वायुमण्डल प्रदूषण नियन्त्रणको प्रमुख माध्यम भएको हो,’ वन मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम कडेलले भने । उनका अनुसार यिनै तीन गुणले गर्दा नेपाली जंगल कार्बन व्यापारमा छनोट भएको हो ।
वनबाट कार्बन व्यापार गर्न वन मन्त्रालयले प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । ‘जंगललाई कार्बन व्यापारमा सूचीकृत गरियोस् भन्ने नेपालको प्रस्ताव विश्व बैंकले स्वीकार गरेको छ,’ पोखरेलले भने । उनका अनुसार ३९ मुलुकले त्यस्तो प्रस्ताव बैंक सामु राखेका थिए । तीमध्ये १४ मुलुक छनोट भए । एसियाबाट नेपालसहित तीन मुलुक यसमा परेका छन् । दुइ साताअघि पेरिसमा भएको विश्व बैंकको ‘स्टेरिङ कमिटी’ को बैठकले छनोट गरेको हो । ‘विश्व बैंकले विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्न २ लाख र क्षमता बृद्धिका लागि १० लाख अमेरिकी डलर दिने भएको छ,’ उनले भने । यसका लागि वन विभागका पदाधिकारी सेप्टेम्बर १७ देखि १९ सम्म अमेरिकामा हुने बैंकको बैठकमा भाग लिन जा“दै छन् । त्यतिबेला दुइ लाख डलरको पहिलो सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि क्षमता बृद्धिका लागि थप रकम आउनेछ । विश्व बैंकबाट अन्तिम प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि कार्बन व्यापार सुरु हुन्छ ।
विशेषगरी विकसित राष्ट्रको संगठन जी-एटले विश्व बैंकको ‘फरेस्ट कार्बन पार्टनर फेसिलिटी’ मा बढी कार्बन उत्पादन गरेबापत कार्बन घटाउने मुलुकका लागि रकम जम्मा गर्छन् । बैंकको फेसिलिटीमा अहिले करिब २१ अर्ब रुपैया“ छ । ‘व्यापार हुने बेलासम्म हामीले वाषिर्क बढीमा चार अर्ब रुपैया“सम्म कमाउन सक्छौं,’ पोखरेलले भने । उनका अनुसार ‘रिडियुस इमिसन थ्रु डिफरेस्टेसन एन्ड ल्यान्ड डिग्रिडेसन’ अवधारणाअर्न्तर्गत योजना तयार गरिएको हो ।
एक मेतृक टन कार्बनको मूल्य अन्‍तराष्‍ट्रीय बजारमा सातदेखि बाह्र डलरसम्म छ । नेपालका बायोग्यास प्लान्टले कार्बन जोगाएबापत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालिसकेका छन् । हाइड्रोपावर र पानी घट्टसमेत कार्बन व्यापारमा सूचीकृत भइसकेका छन् । विभिन्न संघसंस्थाले परामर्शदाता मार्फत व्यापारको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।
‘हामीले परामर्शदाता नियुक्त गरी मन्त्रालयकै जनशक्तिबाट यो प्रस्ताव तयार गरेका हौं,’ उनले भने-‘स्वीकृत भएपछि बैंकले हामीलाई प्रशंसापत्र पनि पठाएको थियो ।’
वैज्ञानिकहरूले वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा बढेकाले विश्व तापक्रम प्रत्येक वर्षशून्य दशमलव शून्य तीन डिग्री सेल्सियसका दरले बढेको बताएका छन् ।
नेपालको तापक्रम शून्य दशमलव शून्य ६ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको छ । तापक्रम बृद्धिले जलवायु परिवर्तनको समस्या देखिएको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, समुद्रको सतह बढेको तथा हिमताल र हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढ्दैछ ।
मानव जीवनका हरेक पक्षमा नकारात्मक प्रभाव देखापर्न लागेको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोप नियन्त्रणका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्‍तराष्‍ट्रीय महासन्धि पक्षका राष्ट्रले जापानमा क्योटो अभिसन्धि पारित गरेका हुन् । अभिसन्धिले कार्बनको मात्रा घटाउन यो व्यवस्था गरेको हो । यसलाई एक सय ७६ भन्दा बढी राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
–सुबोध गौतम साभार-कान्‍तीपुर
Entry filed under: यताउता को कुरा, हाम्रो पर्यावरण, Nepal. Tags: .	Software Engineer and his wife	Global Warming Effect on wildlife	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...